ဟဲနန်ပြည်နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ပြိုလုဆဲအိမ်အတွင်းမှ မသန်စွမ်းအဖွားအို တစ်ဦးအားကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ - Xinhua News Agency
ကျန်းကျိုး၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် Zhumadian မြို့ Dachen ကျေးရွာတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ပြိုကျလုဆဲအိမ်အတွင်းမှ မသန်စွမ်းအဖွားအို တစ်ဦးအား မီးသတ်ဝန်ထမ်းများက ကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ အသက် ၇၀ ကျော် မသန်စွမ်းအဖွားအိုသည် ကိုယ်တိုင်သွားလာခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ၊ ၎င်း၏ နေအိမ်မှာလည်း ကာလရှည်ကြာစွာ မပြုပြင်ဘဲ ထားခဲ့သဖြင့် ယခုမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းချိန်တွင် အချိန်မရွေးပြိုကျသွားနိုင်သည့်အခြေအနေ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ မီးသတ် ဝန်ထမ်း ၁၂ ဦးက အဖွားအိုအားဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ခဲ့ရသည့် ရုပ်သံဖိုင်ကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။(Xinhua)
GLOBALink | Elderly disabled woman rescued from dilapidated home in China’s Henan
ZHENGZHOU, July 22 (Xinhua) — An elderly disabled woman has been rescued from her dilapidated home by firefighters on Wednesday following heavy rainstorms in Dachen Village, Zhumadian City, central China’s Henan Province.
The elderly woman, aged over 70 years old, is unable to move by herself due to disability. Her home had been inastate of disrepair foralong time, and could have collapsed at any point as the rainfall continued. Twelve firefighters were dispatched to evacuate the woman by carrying her out and placing her onastretcher.